Samachar Batika || News from Nepal » उर्लाबारीको जंगलमा भेटियो यस्तो अनौठो केरा
उर्लाबारीको जंगलमा भेटियो यस्तो अनौठो केरा
उर्लाबारी /मोरङको उर्लाबारीस्थित सुनझोडा र पथरी शनिश्चरे साझेदारी वन क्षेत्रमा रातो केराको बोट भेटिएको छ । जंगलमा कोसा लाग्दै गरेको अवस्थामा भेटिएको रातो केरा कसैले रोपेको हो या आफै उम्रिएको हो भन्ने पत्ता लागेको छैन ।
वन कार्यालय अन्तर्गतको मंगलबारेस्थित सवडिभिजन कार्यालयका रेञ्जर अमृत चेम्जोङ लिम्बूले हालै वन क्षेत्रमा रातो केरा फल्दै गरेको देखेपछि फोटो खिचेर फेसबुकमा पोष्ट गरेका थिए । उनले लेखेका छन्- ‘कुन प्रकारको केरा हो चिन्न सकिएन । जिन्दगीमा पहिलो पटक देखें ।’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार दक्षिण भारत र श्रीलंकातिर रातो केराको व्यवसायिक खेती हुने गरेको छ । उनले भने रातो केरा नेपालमा पाइने मालभोग जस्तै हुन्छ । रङ मात्र फरक हो । तर मोरङको जंगलमा भेटिएको भनिएको रातो केरा चाहिं कसैले रोपेको थाहा नभएका कारण जंगली जातको हुनसक्ने र परीक्षण नगरी खान नहुने डा.उप्रेतीको सुझाव छ ।
विभिन्न समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार रातो केराको यो प्रजाति सबैभन्दा पहिले कोस्टारिका देशमा फेला परेको थियो । अहिले पूर्वी अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकामा यसको सबैभन्दा धेरै उत्पादन हुने गरेको छ र विश्वका विभिन्न देशमा निर्यातसमेत हुने गरेको छ ।
विभिन्न समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार रातो केराको यो प्रजाति सबैभन्दा पहिले कोस्टारिका देशमा फेला परेको थियो ।
यो केराको कोसा हल्का गुलाफी रातो रङको हुन्छ भने स्वाद अन्य केराजस्तै हुन्छ । रातो केराको बोट सामान्य केरा जस्तै हुन्छ । यसले ‘जी नाइन’ र ‘विलियम हाइब्रेड’ को तुलनामा २ महिना ढिलो फल दिन्छ । फल पनि यसको रातो र ठूलो हुन्छ ।
यसमा पर्याप्त भिटामिन सी का साथै क्यालोरी पनि प्रशस्त पाइने बताइन्छ । त्यस्तै सोडियम तथा कोलेस्ट्रोल हुँदैन भने म्याग्नेसियम तथा प्रोटिन पर्याप्त पाइन्छ । मुटु सम्बन्धी रोगीका लागि यो केरा निकै लाभदायी हुने बताइन्छ । पश्चिम नेपालको कञ्चनपुरमा केरा उत्पादन कृषि सहकारी संस्थाले इजरायलबाट बीउ ल्याएर पहिलो पटक रातो केराको खेती गरेको थियो ।-उद्योष अनलाइन बाट
प्रकाशित मिति २ असार २०७७, मंगलवार ०४:५५
अभिनेत्री जुही चावला बलिउडबाट अस्ताईन
अरुसंग नसल्कियोस भनेर प्रेमीले आफ्नै प्रेमिकाको पाइन्टमा ताला लगाइदिएपछी..
धरहराबाट खसेर बाँचेकी रमिला वैशाख १२ को कालो दिन सम्झदै गरिन यस्तो अठोट (भिडियो सहित)
श्रीमानको मृत्यु पछि काजकिरियामा बसेकी नर्सले मलिन स्वरमा भनिन्- दाजु मैले मेरो छोरालाई के उत्तर दिने ?
चर्चामा आउनकै लागि आइटम गर्ल मलाइले सार्वजनिक गरिन यस्ता तस्विर, तस्विरले पायो रातारात चर्चा
कुकुरलाई मास्क लगाउँदै यी व्यक्तिले भने :म मरुँला तर यसलाई म’र्न दिन्न ! भिडियो बन्यो भाइरल हेर्नुस्
अभिनयमा हिरो, नृत्यमा जिरो
काजोलको तस्विरको चर्चा, फ्यानले भने दुई संतान हुँदा अझै पनि जवान देखिनु भएको छ त ?
ज्योती मगरले घरघरमा नै पुगेर ग्राहकलाई यस्तो सेवा दिने काम थालिन् (भिडीयो)
बे‘पत्ता बनेको छोरो १९ वर्षपछि घर आइपुग्दा…
यी १० नेपाली नायिका जो आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर सिन क्षेत्रमा आए (फोटो फिचर)
शाहरुखलाई फ्यानको प्रश्न ”अन्डरवियरको रंग कस्तो छ ?” उनले दिए यस्तो जवाफ !!
सन्ध्या बुढा अर्थात ‘काउली बुढी’ को सुन्दरता, (हेरौँ उनका तस्विर)